Onu ahia otutu nke Forklift Type Composting Equipment Suppliers na Factory | YiZheng
Kedu ụdị akụrụngwa Forklift?
Forklift Comdị Composting Equipment bụ igwe anọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-anakọta ntụgharị, ntụgharị, ntigharị na ịgwakọta. Enwere ike ịrụ ọrụ ya n'èzí na ebe obibi.
Kedu ihe akụrụngwa Forklift na-eme?
Forklift Type Compost Ime igwe bụ patent ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị. O kwesịrị ekwesị ka gbaa ụka na obere ọnụ ọgụgụ nke anụ ụlọ nri, sludge na ahihia, iyo apịtị si na nkume igwe nri, njọ slag achicha na ahịhịa sawdust na ndị ọzọ na organic n'efu.
E jiri ya tụnyere akụrụngwa ntụgharị ọdịnala.
Ngwa nke Forklift Type Composting Equipment
Na Forklift Type Compost Ime igwe a na-ejikarị ya eme ihe na osisi fatịlaịza, osisi fatịlaịza na-emepụta, sludge na ahịhịa ahihia, ugbo horticultural na bisporus osisi maka gbaa ụka na mwepụ nke mmiri.
Forklift Comdị Composting Equipment Video Display
Nye ndenye dị mkpa dị ka mkpa ndị ahịa si dị.
Nke gara aga: Vetikal Fermentation tank
Osote: Onwe-propelled Composting Turner Machine